फूली लगाएकै भोलिपल्ट आइजीपी खनालले चाले यस्तो कदम - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका आइजीपी सर्वेन्द्र खनालले दज्र्यानी चिह्न लगाएकै भोलिपल्ट प्रहरीका आकर्षक शाखा प्रबन्ध र निवासमा सरुवा गरेका छन् । प्रहरी संगठनमा राम्रो छवी कायम राखेका र आइजी हुँदा पनि सामाजिक संजालदेखि आमपंक्तिमा प्रशंसा बटुलेका खनालले ती ठाऊँमा सरुवा गर्दा भने वद्नाम पात्रलाई रोजेका छन् । ‘यति स्वच्छ र व्यवसायिक छवी बनाएउनु भएका सर्वेन्द्र सापले प्रवन्ध र निवास सहयोगीमा किन दुर्नाम पात्र रोजिबक्यो ?’ अहिले प्रहरी संगठनभित्र धेरैको प्रश्न र खुल्दुली यहि हुने गरेको छ । उहाँले नचाहाँदा नचाहाँदै कतै कुनै शक्तिको दवावमा यस्तो निर्णय लिइएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि संगठनभित्र जन्मिएको छ ।
उनले शुक्रबारै आर्थिक कारोबार हुने प्रबन्ध शाखामा आफू काठमाडौंको प्रहरी प्रमुख हुँदाका लेखापाल केशव गौतमलाई सरुवा गरेका छन् । खनाल काठमाडौैको प्रमुख हुँदा गौतम लेखापाल थिए । त्यसपछि इन्स्पेक्टर बढुवा भएका गौतम अहिले प्रबन्धमा सरुवा भएका हुन् ।
प्रनि गौतम एमटी(सवारी) शाखामा थिए । प्रबन्धका प्रहरी निरीक्षक बलराम खत्रीलाई एमटीमा लगिएको छ । आइजीपी खनालले शुक्रबारैदेखि निवासमा सहयोगका लागि प्रहरी निरीक्षक गोविन्द कार्कीलाई ल्याएका छन् । प्रबन्धमा लगिएका गौतम र सिमरा इप्रका हुँदै ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत कार्की दुवै प्रहरी निरीक्षकको छवि त्यति राम्रो छैन । लेखाका र प्रबन्धमा कार्यरत प्रहरीहरु सामान्यतया असार मसान्तमा मात्र परिवर्तन गर्ने प्रचलन छ । आफ्नो कार्यकालको खरिदबिक्रीको असार मसान्तसम्मको लेखापरीक्षण गराएर मात्र उनीहरुको सरुवा हुने गरेको थियो । तर आइजीपी खनालले फूली लगाएकै भोलिपल्ट परिवर्तन गरेकोमा प्रहरीभित्र आश्चर्य मानिएको छ ।
गौतम आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखामा दरबन्दी भई एमटीमा काजमा कार्यरत थिए । गौतम विमानस्थलमा लेखापाल हुँदा बैदेशिक रोजगारमा अवैध रुपमा पठाउनेहरुको एजेन्ट बनेर अति बदनाम भएका थिए । उनीमाथि करोडौं सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । एयरपोर्टपछि हनुमानढोकाको लेखापालमा सरुवा भएका थिए । काठमाडौं परिसर नेपालको सबभन्दा बजेट भएको जिल्ला हो । इन्धन, गाडी मर्मत र थुनुवाको सिदामा काठमाडौंका लेखापालले कुस्त आम्दानी गर्न पाउने भएकाले त्यहाँको लेखापाल हुन गृहमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीकै सोर्स चल्ने गर्दछ । अहिले पनि त्यहाँ पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त हुन् । त्यसपछि एमटीको लेखापालमा सरुवा भएका गौतम २ बर्ष गाडीको पार्टपूर्जाको खरिददेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय र भ्यालीभित्रका सबै गाडीका सामान र मर्मतका कार्य सबैमा कमिसन खाएको आरोप छ । २ बर्ष एमटीमा लेखापाल भएर अथाह कमाएपछि त्यसपछि कुकुर शाखामा सरुवा भएका थिए लेखापालकै रुपमा । इन्स्पेक्टर बढुवा भएपछि १ नम्बर गणमा दरबन्दी राखी पुनः कुकुर शाखाम बसेका थिए । तत्कालीन प्रशासन विभागका एआइजी रमेशशेखर बज्राचार्यले मानवस्रोत विभागका वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई भनसुन गरी गौतमको सरुवा १ नम्बर गणबाट आलेपमा गरिदिएका थिए । उनी आलेपमा दरबन्दी राखी एमटीमा कार्यरत रहेकै बेला खनाल आइजीपी भएपछि प्रबन्ध शाखामा सरुवा भएका छन् । गौतम नेपाल प्रहरीका चर्चित र धनाढ्य लेखासमूहका प्रहरीमा उनी ७ नम्बरभित्र पर्दछन् ।
प्रनि गौतमले मैतीदेवीको एक एकल महिलालाई ७० लाख मिटर ब्याजमा दिएका थिए । ७० लाख भन्दा बढी ब्याज असुलीसकेपछि ती महिलाका बिरुद्ध हनुमानढोका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएर थुनाउन खोजेका थिए । पहिला त्यहीँको लेखापाल भएकाले प्रहरीले ती महिलालाई पक्राउ गर्न लागेपछि तत्कालीन काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलले जानकारी लिए । खरेलले ‘ गौतमलाई तैंले यत्रो पैसा कहाँबबाट ल्याइस. । ब्याज नै त्यति धेरै असुलेर उल्टै थुनाउन खोज्ने ? यो रकमको स्रोत खोजी हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइदिन्छु भनेपछि उनी उजुरीको निवेदन फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए । यो एउटा उदाहरण हो, उनले यस्ता धेरै भ्रष्टाचारको रकम मिटर ब्याजमा लगाएका छन् ।
प्रनि गोविन्द कार्की बनेपा ट्राफिकको प्रमुख हुँदा चोरीको गाडी प्रयोग गरेकोमा विवादमा परेका थिए । जुन गाडी त्यतिबेला अपराध महाशाखाका एसपी प्रकाशजंग कार्कीले बरामद गरेका थिए । कार्की ट्राफिकमात्र होइन, सिमरा इप्रकादेखि जहाँ बस्दा पनि घुस्याहा भनेर चिनिएका इन्स्पेक्टर हुन् ।